ဗုဒ္ဓဝင် (ပါဠိ: ဗုဒ္ဓဝံသ Buddhavaṃsa;အင်္ဂလိပ်: the Chronicle of Buddha) သည် လက်ရှိ ဂေါတမဗုဒ္ဓနှင့် ရှေးယခင်က နှစ်ကျိပ်လေးဆူသော ဗုဒ္ဓများ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြထားသည့်ကျမ်းစာဖြစ်၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိ၍ ဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပုံကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ သုတ္တန်ပိဋကတ်၏ ငါးခုမြောက်နိကာယ်ဖြစ်သောခုဒ္ဒကနိကာယ်၏ ဆယ့်လေးခုမြောက်ကျမ်းစာဖြစ်သည်။
အပါဒါန် (အပါဒါန)၊ စရိယာပိဋကတ်တို့နှင့်အတူ ဗုဒ္ဓဝင် (ဗုဒ္ဓဝံသ) ကို ပညာရှင်အများစုက ဘီစီ ၁-၂ ရာစုအတွင်းက ရေးစပ်ခဲ့ကြသည်ဟု မှတ်ယူထားကြကာ ပါဠိကျမ်းစာများတွင် နောက်မှဖြည့်စွက်သည်ဟုလည်း ယူဆကြလေသည်။
ဗုဒ္ဓဝင်ကို အခန်းပေါင်း (၂၉) ခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပထမအခန်းတွင် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာက တရားဟောတော်မူရန် တောင်းပန်ရာ ဘုရားရှင်က သတ္တဝါတို့ကို သနားတော်မူသည့် အကြံဖြစ်၍ နတ်နှင့်တကွ လူအပေါင်းတို့ထက် မြင့်မြတ်ကြောင်း အစွမ်းသတ္တိကိုပြသသောအားဖြင့် ကောင်းကင်၌ ရတနာစင်္ကြန်ကို ဖန်ဆင်း၍ တန်ခိုးအစွမ်းကို ပြသခဲ့ရာ နတ်၊ ဗြဟ္မာအပေါင်း ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်း၍ ကြွေးကြော်၊ ပူဇော်ကန်တော့ကြသည်။ သာရိပုတ္တရာ၊ မောဂလ္လာန်၊ ကဿပ၊ အနုရုဒ္ဓါစသော ရဟန္တာများ၏ ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းကို ခံယူပြီးနောက် ဂေါတမဗုဒ္ဓက လွန်လေသောဘဝ သုတိသာနတ်ပြည်မှ သေတကေတု (သန္တုဿိတ)အမည်ရှိသော နတ်သားဖြစ်ခဲ့ပုံမှစ၍ ဟောပြောသည်။
ဒုတိယအခန်းတွင် သုမေဓာသူဌေးသား၏ ဒီပင်္ကရာဘုရားထံမှ ဗျာဒိတ်ခံယူသည့်အကြောင်း၊ ပါရမီဆယ်ပါးဖြည့်ဆည်းရန် ဘုရားရှင်၏ မိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းများကို ဖော်ပြထားသည်။
အခန်း (၃) မှ အခန်း (၂၆) အထိ နှစ်ကျိပ်လေးဆူသော ရှေးဘုရားများ၏ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည့်အပြင် ဂေါတမဗုဒ္ဓအလောင်းလျာ၏ ထိုထိုအတိတ်ဘဝများ၌ မည်သို့ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကို ဖော်ပြထားသေးသည်။
အခန်း (၂၇) တွင်မူ ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ပြရေးသားထား၏ ။
အခန်း (၂၈) ၌ ဒီပင်္ကရာဘုရားမတိုင်မီ ပွင့်တော်မူခဲ့သော ဘုရားရှင် သုံးပါးအကြောင်းပါဝင်ကာ အနာဂတ်တွင် ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တယျဘုရားအကြောင်းကိုလည်း ရေးသားထားလေသည်။
ဓာတုဘာဇနီယကထာသည် အခန်း (၂၉) ဖြစ်ပြီး ဂေါတမဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် ကြွင်းကျန်ရစ်သော ဓာတ်တော်များကို ဖြန့်ဝေယူငင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
Morris၊ R, ed. (1882)။ "XXVII: List of the Buddhas"။ The Buddhavamsa (PDF)။ London: Pali Text Society။ pp. 66–7။ archived from the original on 2016-02-28။ CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
Law၊ BC, ed. (1938)။ "The lineage of the Buddhas"။ The Minor Anthologies of the Pali Canon: Buddhavaṃsa, the lineage of the Buddhas, and Cariyā-Piṭaka or the collection of ways of conduct (1st ed.)။ London: Milford။
Takin၊ MV, ed. (1969)။ "The lineage of the Buddhas"။ The Genealogy of the Buddhas (1st ed.)။ Bombay: Bombay University Publications။
Horner၊ IB, ed. (1975)။ The minor anthologies of the Pali canon. Volume III: Buddhavaṁsa (Chronicle of Buddhas) and Cariyāpiṭaka (Basket of Conduct)။ London: Pali Text Society။ ISBN 0-86013-072-X။
ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်) (၁၉၉၂)။ "အခန်း ၉: နှစ်ကျိပ်လေးဆူဗုဒ္ဓဝင်"။ in ကိုလေး (ဘာသာပြန်); တင့်လွင် (ဘာသာပြန်) (eds.)။ မဟာဗုဒ္ဓဝင် (The great chronicle of Buddhas, Volume One, Part Two) (PDF) (1st ed.)။ ရန်ကုန်: Ti=Ni Publishing Center။ pp. 130–321။ archived from the original on 2016-02-14။ CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Buddha Dharma Education Association (2014)။ Suttanta Pitaka: Khuddaka Nikāya: 14.Buddhavamsa-History of the Buddhas။ Guide to Tipiṭaka။ Buddha Dharma Education Association။
↑ Manual of Buddhist Terms and Doctrines (Pali dictionary)။ palikanon.com။
↑ Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra။ Translations from the Taishō Tripiṭaka။ Lapis Lazuli Texts။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗုဒ္ဓဝင်&oldid=746350" မှ ရယူရန်
၇ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။